GOCOOLTHOKAR: July 2012
कतै सुनेको थिएँ जागिर भनेको जाने र गिरने दुई शब्दबाट बनेको । यसमा केही सत्यता सत्यता छ तर पुरै होइन । खल्तिमा लक्कु अर्थात आनासुकि नभएपछि खानै पर्छ भन्छन् यो । जवानी भएकालाई त केमा जागिर छ भन्ने कुरैले कस्ती कन्या भन्ने सम्म जुराउँछ रे । यो नखाँदा जति सजिलो हुन्छ खाए पछि भने गा¥हो । बाले काठमाडौ छिर्दा सेतो टिका र खादा लगाइदिदै भनेका थिए राम्रा बिषय पढ्नु । म जब गाउँबाट सहर पसे मनमा केही कुरा थिएन जो साँच्चै सहरमा बसेर पुरा गरौ । तर एउटा कुरा भने मलाई सधै लाग्ने गरेको थियो म पत्रकार बन्न पाए । त्यही भएर मिलाएर मैले त्यही बिषयमा भर्ना गरेँ । जब यो कुरा बालाई कसैले सुनाइ दिएका थिए । तिनी रिसाका थिए रे । छोरोले राम्रो केही पढ्ला भनेको त यो नामै नसुनेको पत्रकार । ती छक्क परेछन् । म पत्रकार हुन्छु भन्ने बनाउने काम भने पानसोनिक रेडियोले गरेको थियो । त्यो बेला मेरा गाँउमा बिजुली बति थिएन । नत पत्रपत्रिका । मनोरञ्जनको एकमात्र साधन रेडियो थियो । त्यो पनि रेडियो नेपाल । त्यही रेडियो हो मलाई पत्रकार बन्न हौस्याउने । म कति रडियो सुन्थे भने त्यो रेडियोमा बज्ने सबै कार्यक्रम कुन बेला, कति खेर, कति मिनेटमा बज्छ थाहा पाउँथे । अरु त अरु म कति बज्यो समेत रेडियो सुनेरै भन्दिन्थे । त्यो बेला रेडियोमा खुबै बज्थे नारायण गोपाल ,बच्चु कैलास, प्रेमध्वज प्रधान देखि लालबहादुर खाती , प्रेमराजा महत,बमबहादुर कार्की । ती सबै म पालै पालो जे आयो त्यही सुन्थे । मेरा बा भन्थे लोक गीत र लोक सेलो आए बजाउने नत्र होइन बुझिस । म बाको अघि बुझे भन्थे । तर मलाई आधुनिक ,पप जे भएपनि चल्ने बानी थियो । त्यसैले म बा नभाको बेलामा बजाइदिन्थे जोडले । बाले रेडियो नवजा भन्नुको पनि कारण थियो । एउटा त म बिद्यार्थी । मैले रेडियो मात्र सुने भने बाको छोरोलाई धेरै पढाउने लक्ष्य फेल खान्थ्यो । दोस्रो कारण झन तगडा थियो । हाम्रो घरमा भएको पानासोनिक रेडियोलाई महिनाको एक जोर नयाँ र अर्को जोर पुरानो टाइगर ब्याट्रि चाहिन्थ्यो । त्यो भनेको कम्तिमा महिनामा ३० रुपैया अर्थात एक दिन रेडियो मैले घन्काएँ भने बाको खल्तिको एक रुपैया चिलिम । अनि त बाको पारो किन नतातोस । तर मेरा बा सधै घरका घरै बस्न भ्याउदैनथे । अनि पानसोनिक मेरै झै थियो । घन्काउने बजाउने सबै मेरै काम । आमा त मैले बजाएको सुन्नु हुन्थ्यो । मैले धेरै चर्को बजाउदा मात्र झर्किदै भन्नुहुन्थ्यो यसले गरिखादैन काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमी तिर । रेडियो घरमा आउँदाको कुरो पनि रमाइलो लाग्छ सम्झदा । एक दिन इन्डियाको लाउरेले गज्जवको ठूलो बाकस काँघमा हालेर हाम्रो घर गाउँलाई नै थर्काउँदै आए । हाम्रो घर मुल बाटैमा छ । अनि हजुर बा भेगकै नम्बरी कर्मी । राम्रो काठको केही सामान बनाउन प¥यो कि मानिसहरु हाम्रो घरको आँगनमा आउँथे र भन्थे लौ घ्याङाली बाजे यस्तो खालको कुरा बनाइदिन प¥यो । यति हातको यस्तो बुट्टाको । जस्लाई जस्तो चाहिने हो त्यस्तै खालको सामान । हजुवा तिनका माग अनुसारका सामान बनाउथे । ती बनाउन अराउने मानिस आउँथे हेर्थे र आफूले बनाएको भन्दा पनि राम्रो सामान बनेको देखेर खुशी हुदै भन्थे त्यसै भन्दैन रैछन् है मान्छेले घ्याङाली कर्मी भनेर । ती हजुर बा काठको काममा लागेपछि दुनिया बिर्सिएकी झै लागि रहन्थे । त्यो लाउरे आएको दिन हजुरबाको खासै काम थिएन क्यारै उहाँ त्यतिकै बस्नु भएको थियो । लाउरेले हजुरबाको नाम लिदै हाम्रो घर आयो । हजुरवाले खै केके कुरा गरे कुन्नि ती लाउरे त्यो दिन हाम्रैमा बस्ने भए । बेलुकाको लागि हिमालमा घाम नपुग्दै रातो भाले ढालियो । अनि अरु कुरा धेरै बनाए । मलार्ई पनि खुब रमााइलो लाग्यो । उनले नयाँ कुरा बोकेका थिए । गाउँमा पुजाको जाग्रम बसेर दोहोरी घन्किएझै गीत घन्किन्थ्यो । नाम पनि भने लाहुरेले जापनिज जम्बो क्यासेट । लाउरेले अनेक गीत बजाउँथ्यो । म केही बुझ्दैनथे । शायद हाम्रो घरमा भएका कसैले पनि बुझेनन् । हजुरवाले त भन्नु नै भयो बाबु नेपाली गीत छैनन् ? लाउरेसँग नेपाली गीत पनि रहेछ । उस्ले बजायो लाउरेको रेलिमाई फेसनै राम्रो ....... । घरमा भएका सबै जना खुशी भए । मैले पनि बल्ल गीत बुझे । भाले भोज सकियो । भोलिपल्ट हजुरबाले भाका मिलाएर क्यासेट छोड्नका लागि कुरा गरे । लाउरेले मानेनन् । अर्को पटक बिदामा आउँदा ल्याउने कुरा गरे । हजुवाको भाले भोज बिफल भो । त्यसको एक बर्ष जति पछि होला ति लाउरे फेरी आए । पहिले जस्तो उसँग ठूलो क्यासेट थिएन । सानो लुगाले सिलाएको झोलामा हालेको पानसोनिक थियो । उसले हजुरबालाई दिएको बचन पुरा गरे । हजुरबाको मन अलि खिन्न भएपनि फेरी भाले भोज भो । रेडियोमा समाचार आयो, गीत आयो, अनि अरु के के हो के के । सबै हामीले बुझ्ने भाषामा । मलाई पहिलेको लाहुरेले नदिएको क्यासेट भन्दा यो राम्रो लाग्यो । बोक्न पनि सजिलै सकिने । त्यसपछि सुरु भयो रेडियो र मेरो समन्ध । केही दिन हजुरबाले रेडियो कसैलाई छुन दिनु भएन । म हजुरबा नभएको मौकामा खोल्ने बन्द गर्ने र बोकेर हिड्ने गर्थे । खै के भएर हो हजुर बालाई रेडियोले तानेन । त्यसपछि बाले त्यसको हेरबिचार गर्न कर लाग्यो । अनि त मेरो अधिकारै भो चलाउने । रेडियोको मिटर हुन्थ्यो हातैले घुमाउने । त्यो खै के भएर हो बज्दै जाँदा चल्थ्यो कि के हो स्या आउँथ्यो । त्यसलाई मिलाउने सिप मेराबाको भन्दा मेरो बढि थियो । पहिले पहिले मलाई विस्वास नगरेका बाले आफै मिटर घुमाउथे । उनले धेरै चोटी घुमाउदा पनि स्याका स्या भएपछि तिनले यो काम मलाई अह्राए । मैले मिटर बज्ने ठाँउ कन्ठै गरे । काठमाडौ क्षेत्रियप्रशारण कतिमा ,पोखराको कतिमा, सुर्खेतको कतिमा अनि कति बजे । त्यसपछि बाले रेडियोको जिम्मा मलाई नै दिए । एक दिन बाले रिसको झोकमा भने तँ यसरी नै रेडियोमा झुन्डि रहिस भने के बन्लास खै ? मैले भन्दिए म रेडियोमा काम गर्छु यसरी नै बोल्नेमा । बाले मेरो कुरा पत्याएनन् । गाउँमै थाहा थियो पत्रकारिता पढाइ ग¥यो भने रेडियोमा बोल्न पाइन्छ । पढाइ आरआरमा हुन्छ । पढेको धेरै समय मेरो रेडियोमा बोल्ने सपना सपनानै रह्यो । पत्रकारिताको कुरा हुन्थ्यो । रेडियोको इतिहासको हुन्थ्यो । तर कसरी रेडियोमा बोलिन्छ कसरी रेडियो नेपालमा पुगिन्छ । कुने गेट सजिलो हो कहिल्यै भनेन । तैपनि कुनै न कुनै दिन आउला भनेर मैले हरेसै भने खाइन । त्यस बिचमा रेडियोमा बोल्ने प्रयास नै नगरेको भने होइन । कोठामा रेडियो छैदैथ्यो । मन पर्ने रडियो कर्मीको शैलीमा आफ्नो बोली बनाउने प्रयास भो । कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा मेरो पनि उसको झै स्वर मिले जस्तो लाग्थ्यो । तर साथीसँगीलाई सुनाउन भने लाज । बोल्दा पनि मेरो शुद्धाशुद्धि राम्रो थिएन । मेरो रेडियोमा बोल्छु भन्ने सपना झन्डै बिलाउदै गएको । त्यस्तैमा काठमाडौको एउटा एफएममा काम पाइएला जस्तो भो बेतलबी । मेरो भागमा एउटा कार्यक्रम हप्ता भरिमा । बोल्नको लागि सिँहदरबारको स्टिुडियो जानु पर्ने । रेडियोबाट बोल्न पाउने कुराले मात्रै पनि झन्डै हर्टफेल । कार्यक्रम रेर्कडेड थियो ।स्टुडियो गज्जबको थियो । भित्र बोलेको बाहिर नसुनिने अनि बाहिर बोलेको भित्र । हात चलाएको हाँसेको सबै देखिने । बिचमा सिसा राखिएको थियो । त्यही सिसाबाट टेक्निसियनले भित्र बोल्नेले दिएको इसराको गीत बजाउँथे, बिज्ञापन बजाउँथे, रिपार्ट बजाउँथे । म दिएको समय भन्दा अलि अघि पुगेको थिएँ । म भन्दा अघिको कार्यक्रम लाइभ थियो । उनले यसरी नै कार्यक्रम गरे । टेक्निसियन हाँसी हासी कार्यक्रम बजाइ रहेका थिए । लाग्यो मज्जैको मान्छे रहेछन् । लाइभ कार्यक्रम सकियो अनि पालो आयो मेरो । टेक्निसियनले बिभिन्न इसारामा भन्ने तरिका सुझाए । ब्रेकको बेला के भन्ने, गीत बजाउने बेलामा के भन्ने, बिज्ञापनको बेलामा के भन्ने । स्टुडियो छिर्ने बित्तिकै मलाई निक्कै असजिलो भयो । टेक्निे सियनले सिकाए एयरफोन लगाउन लगाए । अनि उनले सुरु भनेर इसरा गरेपछि कसरी बोल्ने भनेर पनि भने । उनी बाहिर निक्लिए । स्टुडियोको ढोका लाग्यो । मैले एयरफोन टाउकोमा राखेँ । त्यसको भारी कति भने मैले तामाकोशीबाट दस पाथी चामाल बोके भन्दा पनि बढि । के बोल्ने भनेर स्क्रिट लेखिएको थियो । पहिलो शब्द नमस्कार स्रोता भन्नु पर्ने । टेक्निसियनले बोल्ने इसारा गरे । मेरो मुखबाट नमस्कार भन्ने शब्द निस्किदै निस्केन । साटोमा स्वास्वा र अँअँअँ मात्रै निस्कियो । टेक्निसियनले सम्झाए । नडाराइ भन । यो लाइभ होइन अलिअलि बिग्रे बनाउन मिल्छ । उनी फेरी स्टुडियो बाहिर निस्किए । अनि फेरी सुरु भन्ने इसारा दिए । स्क्रिटको अक्षर यताउती हल्लेझै पो भोे । अनि डर यसरी बढ्यो कि सासै बन्दै होला झै । नमस्कार नै भन्न नसकेपछि मलाई भाउन्न भो । एसि भएको कोठामा मेरो पसिना पसिना जिउभरी । धेरै समयमा पनि भन्न नसकेपछि अघि सम्मको टेक्निसियन डन भए । केहो रेडियोमा बोल्छु भनेर मात्रै हुन्छ । बोली पनि चाहिन्छ नी । अनि उनले आफ्ना हाकिमलाई गाली गरे कस्ता कस्ता मान्छे पठाउँछन् हाकिमहरु पनि । उनको कुराले सिँहदरबार छिर्दा आफै सिँह झै सम्झेको म अब बिरालो भन्दा पनि तल झरे । दाइ अलि प्राक्टिस पुगेन जस्तो छ । म अलि पढेर फेरी रेकर्ड गरुँ है । उनले ठूलो आँखा तरे । मैले हुन्छ भनेको बुझेँ । सोचे साला कत्रो प्राक्टिसथ्यो कोठामा । कस्तो मज्जाले नमस्कार स्रोता भन्न सक्थे । रेडियो नेपालको एकसय एक नम्बरी कार्यक्रमको नक्कल गर्न सक्थे । अरु त अरु हजुरबाले लाउरेबाट भाले भोजमा उपहार पाएको रेडियो काँधमा झुन्ड्याएर गोठाला जाँदा पनि प्राक्टिस गरिएको थियो । यी सब कुरा सम्झेर आउँदा आफै देखेर वाक्क लाग्यो । अनि यत्रो लामो सपना पुरै हुन लागेर फेरी हराउन लागेकोमा पछुतो पनि । मनमनै सोचे हुन्न केटा यसरी त कम्मर कस्नु पर्छ । रिसाएर डन भएका टेक्निसियनलाई सानो स्वरले सोधे सर बाथरुम कता छ ? अघि दाइ भनेको उनलाई सरमा प्रमोशन गरे तर उनी बोलेनन् । आँखैले इसारा गरे स्टुडियो बाहिर । बाथरुममा पसेर मुख धाएँ । नयाँ जोसले हातमा भएको स्क्रिट पढेँ । खरर गयो । अघि स्टुडियो भित्र यसरी गाको भए । फेरी दोहो¥याएँ । फेरी नअट्की नै खरर गयो । अलि जोस बढ्यो । अनि स्टुडियोमा छिरेँ । टेक्निसियनले डाइलग मारे के हो भाइ पिसावै आयो कि के ? मैले केही बोलिन । उनले फेरी स्टुडियोमा छिर्न र बोल्न भने । अनि यदि यसमा बिग्रेमा आफुले केही गर्न नसक्ने कुरा गरे । भित्र छिरेर मैले पनि खरर पढेँ । उनी छक्क परे । आधा घन्टाको कार्यक्रम बोल्न पर्ने जम्मा जम्मी थियो होला दस बाह्रा मिनेट । एक दुई ठाँउमा बिग्रियो । मैले दोहो¥याएँ । भएको हातको स्क्रिप्ट भ्याए पछि बाहिर निक्लिएँ । अघिको डन टेक्निसियन खुशी भएछन् । स्वर त राम्रो रैछनी भाइ बोल्ड । पहिले चाही किन हतासिएको त । पहिले पनि कतै काम गरेका थियौ कि के हो ? त्यसपछि सुरु भएको पत्रकारिताको जागिर अहिले सम्म जारि छ फरक यति हो कहिले कता कहिले कता । अनि गालि गर्ने मानिसहरु फेरिएका छन् कतै सम्पादक कतै प्रेसका साहुजी ।
Labels: article of gocool, gokul dhorje tamang, kaam, nepali journalism, nepali journalist, nepali media, work
मस्त मस्त अरु निदाएको बेला
रंगीन रात बिताउदै छ ठमेल ।
होस हराएर केही भुइमा खोजेझै
हराइरहन्छ धन्टौ मान्छेहरु
सुटुक्क कसैलाई सुइको नदिइ
दुई बोतल रित्याएर
एक पेग लिन हुलका हुल साथीलाई सुनाएर
दिउसो छोराको महिना फि नतिरी सोजिन्छन् ठमेल ।
एक पेग मस्त मातिन्छन्
अनि बाहना हुन्छ टन्न खाएको
भुल्छन् काइलीका भट्टीहरु
भुलाउँछ ठमेलले ।
भुइमा जवनी छरिन्छ
रुपैया,डलर,युरो,भारु, डिनार, रियाल, युयान
येन सब चल्छ सब ।
यहाँ कसरी कमाएको कुरा हुदैन
पसिना बगाए पनि रगत छदाए पनि ।
तिमीसँग छ भने सबथोक छ
मसाजका तरिका छन् मसाज गर्नेका बिकल्प छन्
बस्ने कोठा देखि चुठ्ने भाँडा सम्म ।
खानेका तरिका खानाका परिकार
अनेक छन् अनेक
नबोलिने भाषा छैन
नपाक्ने परिकार पनि
यो ठमेल हो ठमेल ।
अन्त रात पर्दा
यहाँ उज्यालो हुन्छ
अन्त गर्ने नहुने कुरा यहाँ सजिलै हुन्छ ।
हर गल्लि र कुनामा
नक्कल हुन्छ नक्कल
छेउमै भएको असन खुइलिएर भत्किनै लागेको बेला
अझ तन्नेरी झै बसिरहेको ठमेल
फुलेको कपाल ठाडो पारेर
रिक्की मार्टन शैलीमा
जबरजस्त तन्काउने कस्मेटिक दलेर ।
Labels: gocool's poem, gokul dhorje tamang's poem, nepali kabita, nepali poem, thamel
अटोमा केही लेख्दिन्छौ । दस कक्षाको अन्तिम भएको बेला तिर प्रत्येक दिन साथीहरुले एउटै कुरा दोहोर्याउन थाले । त्यो भन्दा पहिले अटो भन्ने हाम्रो बिद्यालयको लागि नयाँ थियो । एकदम नयाँ । एकाएक सबै जसो साथीले अटो किने बनाए । पैसा भएको साथीहरुले सदरमुकाम जाँदा रेडिमेड अटो किने । त्यसमा फोटो टास्ने ठाँउ हुन्थ्यो । रुचि लेख्ने कुरा हुन्थ्यो । मन पर्ने फिल्म हिरो हिराइन, गीतसंगीत सबै कुरा लेख्न मिल्थ्यो । त्यस्तो अटो किन्न त्यो बेला एक थान गैडा चाहिन्थ्यो । अझ राम्रैमा आँखा पर्यो भने दुईथान गैडा पनि चाहिन सक्थ्यो । त्यसैले यो रेडिमेट अटो धेरै साथीको लागि सजिलो भएन । बिकल्पमा आफैले त्यस्ता अटो तयार गर्ने सजिलो उपाय थियो । त्यो बेला बोक्लो कभर भएको इगलछाप कापी बिस रुपैयामा पाइन्थ्यो । त्यसलाई साथीहरुले फोटो टास्ने ठाउँ बनाए, रुचि र गीतसंगीतका कुरा लेख्ने मिल्ने बनाए । आउनेहरुले गुलाफ, कमल जस्ता फूल फुलाए । हिरो हिराइनका बारेमा लेख्न मिल्ने बनाए । अनि रेडिमेड अटोलाई माथ ख्याउने गरि आफैले सस्तो र सजिलै अटो बनाए ।
अटोमा राजेश हमाल हुन्थे । उनको रामकृष्ण, एक नम्बरको पाखे, अल्लारे, सिमाना र अरु हुन्थे । राजेशलाई साथ दिन जल शाह, करिष्मा मानन्धर, मेलिना मानन्धर, जस्ता हिराइनका ताती हुन्थ्यो । यस्ता हिरो हिराइन एक रुपैयामा किन्न पाइन्थ्यो । जति बढि टास्यो त्यति राम्रो ।
आफैले बनाएको अटो आफ्नो रुची अनुसार बन्यो । रंगीचंगी साइनपेनले अक्षर मिलाएर लेख्यो । कतै रातो कतै हरियो कतै निलो हेर्दै पढ्न मन नभएकालाई पनि पढौ पढौ लाग्ने । लेख्न मन नभएकोलाई पनि लेखौ लेखौ लाग्ने ।
हुँदा हुँदा बिद्यालयको अन्तिम हप्तामा दिनमा एक जनाको भन्दा बढिको अटो भर्ने दिन आयो । तर लेख्ने के भनेर सम्झीदा सम्झिदा एउटै साथीको अटो भर्न एक हप्ता जति लाग्थ्यो । एक दिन अटो दिने साथीसँग भए गरेका कुरा मिलाएर लेख्ने अनि अर्को दिन अलि अलि मुतmक, कबिता कतैबाट साभार गरेरै भए पनि लेख्ने । आफूले भन्दा पहिले लेख्ने साथीका लेखाइ पनि हेर्न पथ्र्यो नै । पहिले लेखेका साथीका माथ खाने गरि लेख्न पर्ने तर काम सजिलो भने थिएन ।
लेख्ने ब्याहोरा भने जस्ले जसरी लेखे पनि एकै झै हुन्थ्यो । कहिले कही कक्षाका मन परेको केटा केटी पर्यो भने चाही थारै डवल मिनिङ लाग्ने सम्बोधन र ब्यहोरा लेख्थे । जस्तो कि प्रिय साथी । धेरै साथीले लेखे मनका कुरा । धेरै काल दिन सम्झने कसम खाए । अरुले लेखेका कुरा पढ््ता लाग्थ्यो बिद्यालय बेकारमा छोड्न लागिएछ । यो एसएलसी पनि कति छिटो आएको । अनि बेला बेलामा परेको झगडा र तुष छ भने पनि सबै कुरा कुनै जादुको छु मन्तरले सकाए जस्तै सकाएकोथ्यो अटोले ।
अटो भर्ने र बोक्ने काम एसएलसी जाँच एक दुई हप्ता अघि सम्म चल्यो । चरिकोट दोलखाको सदरमुकाममा एसएससीको सेन्टर थियो । द्धन्द्धका कारण नेपाल भरिको जाँच सदरमुकाममा हुन्थ्यो । सदरमुकाम भनेको पैसा भए मोज मस्ति र कसैको करकाप नहुने ठाउ थियो । मज्जाको ठाँउ । त्यहाँ दिनदिनै बिद्यालय जानु थिएन । हामीलाई आइरन गेट आइरन गेट भनेर कराउने मास्टर थिएनन् । थियो त मस्ति थियो । बाआमाले टिउसन पढाउन दिएको पैसा थियो । कोठा भाडाको लागि दिएको पैसा त झन हुने नै भयो । मनलाग्यो पढ्यो मन लाग्यो घुम्यो मन लाग्यो साथीको अटो झिक्यो । भाव भाङ्गी मिलाएर वाक्य खर्चियो ।
मेरो कक्षामा ३२ जना बिद्यार्थी थिए । ती मध्ये २० भन्दा बढिको अटो तयार थिए । मेरो अटो बनाउने रहर रहरै भयो । मलाई लाग्थ्यो मेरो अटो फरक हुन पर्छ । त्यसैले म चरिकोटबाटै अटो किनेर ल्याउने सुरमा थिएँ । म नगए पनि बालाई ल्याउन लाउने सुरमा थिएँ ।
नभन्दै एक दिन बा चरिकोट जाने भए । उनलाई अटोको बारेमा के भन्ने । यो पढ्न चाहिने हो भन्ने कि लेख्न । अनि त्यति साह्रो महंगो कपिमा झन राजेश हमाल चप्काएर फूल कबिता, रंगिन अक्षर लेखेको देखे तिनले मलाई के भन्लान् । मैले सिधै उनलाई यो कुरा भन्न सकिने अबस्था भएन ।
अब मैले मेरो सोर्स प्रयोग गरेँ आमा । कति प्रयास गरेर आमालाई अटोको महिमा कण्ठ गराएँ । पहिलो त आमाले राम्ररी अटो भन्न नआएर हैरान । अनि सम्झाउन उनलाई मैले बाक्लो कापी हो त्यसलाई अटो भन्ने कुरा सम्झाएँ । उनी मेरो कुरामा राजी भइन ।
चरिकोटबाट बा फर्किए । म ढुक्क थिएँ आमाले भने पछि नहुने केही थिएन । जाबो बा न थिए । आमाले मेरो लागि अटो भने पछि हुन्न भन्ने हिम्मत कस्को ? त्यसैले म फुरुङ थिएँ । मसँग जस्तो राम्रो अटो अरुको नहुुने भो भन्नेमा । बाले मलाई बोलाए । एक मन त डर भो । स्पष्टिकरण माग्लान कि भनेर । तर अर्को मनले भन्यो जाबो स्पष्टिकरणमा के छ ? शानदार अटोमा पो छ ।
तिनले झोलाबाट झिकेर मेरो हातमा थमाए । त्यो बाक्लो इलग छाप कपि थिएन । न मैले सोचेको अटो नै थियो । तिनले त लामो र बाक्लो लेख्ने कपिपो ल्याएछन् । न रुनु न हास्नु । न लिनु न फाल्दिनु । परेन फसाद । मेरो सपना चकानाचुर भयो । बाले भने होइन केटो चरिकोट भरि खोजियो त्यत्रो दुई सय जाने एउटै कपि त भेटिएन त ।
आमा खोज्दै म गोठैमा पुगेँ । उनी भैसी दुदै थिइन । दुनिया हारेको अनुभव भाको मलाई आमासँग गुनासो थियो । एक सास नबिसाई पोखेँ । उनले भनिन अनि त्यही कपिमा लेख्न । मलाई बिहान तंले भनेको नामनै आएन । त्यसैले दुई सय पर्ने एउटा कपि हुन्छ रे ल्याइदिनु भनेकै थिएँ त । ल्याइदिएनन् ?
बा चरिकोट जानु भन्दा अघिल्लो दिन त्यत्रो अटो महिमा । बेकार भो । उनले सम्झाइन एक महिना पछि तंआफै किन हुदैन । नहुनु के थियो । त्यसपछि मलाई अटो बनाउने रहरै मर्यो । बरु साथीकामा भर्दै लेख्दै आनन्द भो ।
यस्तो अटो भरेको पनि दस बर्ष बितेछ । हामी साथीहरु पनि छुटिएको पनि त्यति नै भो । कहिले कही आक्कल झुक्कल साथीहरु भेटिदा सन्चो बिसन्चोको मात्रै कुरा हुन्छ । अनि कस्ले कति के गर्यो भन्ने पनि । बिद्यालय, अटो त सबैले बिर्से नै होला । समयसँगै । मसँग अटो भएन । तर अटोको सम्झना आलै छ ।
अटो भर्दा सबै भन्दा गार्हो मुक्तक कबिता लेख्नु थियो । अरुले साथीले कता कताबाट लेख्थे थाहा भएन । लेख्न चाही लेख्थे ।
पसलै जानु सुन्तला खानु हातैले उदारी
रातीको लेखाई बतिको छेकाइ पढ्नु है सुधारी ।
आकाशमा उड्ने चरिलाई के थाहा समुन्द्रको गहिराई
धोका दिनेलाई के थाहा मायाको बुझाई ।।
खोला बगे पनि बालुवा रहिरहन्छ
मान्छे टाढा भए पनि सम्झना आइ रहन्छ ।।।
Labels: article of gocool, auto, mero bidhyalaya, mero lekh, phasku school, schoolko samjhana
केशव केसी सौलयुवक माध्यमिक बिद्यालय, बुङमतीमा २ कक्षामा पढ्छन् । उनी शिक्षकले भनेका कुरा लामो समय सम्म सम्झन सक्दैनन् । अनि अरु बिद्यार्थी जस्तो छिटो लेख्न र पढ्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले बिद्यालयले उनीलाई सके सम्म ब्यबहारिक रुपमा सिकाउने प्रयास गरेको छ । बिद्यालयमा केशव झै मानसिक र शारीरिक अबस्था कमजोर भएका ३८ बिद्यार्थी छन् । सबै बिद्यार्थीलाई रुचि अनुसार खेल्ने र बजाउने सामाग्री दिइन्छ ।
धेरै बिद्यार्थीलाई गीतसंगीत मन पर्छ । कोही बाजा बजाउछन कोही गीत गाउँछन् । यस्ता गाउँदै बजाउदै सिकाउने हो भने उनीहरुले धेरै कुरा सजिलै सिक्छन् । लामो समय सम्म सम्झन्छन् । शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर भएका बिद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकले बिशेष खालको तालिम लिएका छन् ।
पढाउने बेलामा उनीहरु र सामान्य बिद्यार्थीलाई संगै राखेर पढाए पनि उनीहरुलाई बुझाउन थप सयम लाग्छ । धेरै बर्ष देखि शारीरिक र मानसिक बिद्यार्थीलाई पढाई रहेका दयाराम महर्जनले सुनाए । बाजाकै तालमा कति चोटी कुन बाजा कसरी बजाउने भनेर गन्न सिकाउन सकिन्छ । उनीहरु यस्तो शिक्षण शैलीमा रमाउँछन् । ध्यान दिएर सिक्छन् । त्यसैले पनि हामीलाई सिकाउन सजिलो भएको छ । उनले थपे ।
केशवलाई तबला बजाउन आउँछ । उनले तबला बजाउन थालेको पनि दुई बर्ष भन्दा बढि भैसक्यो । उनी परेको बेलामा बाँसुरी पनि बजाउँछन् । यस्तो काम गर्न उनलाई निक्कै मन पर्छ । मलाई तबला बजाउन आउँछ । धेरै राम्रो चाहि होइन । म केही गीतहरुलाई सुहाउने बजाउन सक्छु । मजस्तै बाजा बजाउन सक्ने साथीहरु अरु पनि छन् । हामी सबै जना मिलेर बजाउँदा बस्दा रमाइलो लाग्छ । उनले अनुभव सुनाए ।
उनीहरु मध्ये गीत गाउन जान्नेमा चाहि रमेश थापा छन् । उनी आँखा देख्दैनन् । साथीहरुले बाजा बजाएपछि मलाई गीत गाउन मन लाग्छ । अनि जब गीत गाउँछु निक्कै आनन्द लाग्छ । गीत झै पढाईका कुरा पनि सम्झन सकिन्छ । त्यसैले पनि मलाई पढाइ र गीत उस्तै लाग्छ । उनले अनुभव सुनाए । पढाईसँगै गीतगाउनमा राम्रो गर्ने उनको रहर छ ।
शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर बिद्यार्थीका समस्या फरक फरक छन् । उनीहरुलाई सुहाउदो खेल सामाग्री दिइएको छ । यस्ले गर्दा उनीहरुलाई सजिलै समय कटाउन र नयाँ कुरा सिक्न सजिलो भएको छ । स्थानिय सुर्जलक्ष्मी महर्जन उनीहरुले बजाएकोे गाएको सुन्न बेला बेलामा आउँछिन् । उनीहरुले सामान्य मानिसको झै राम्रो त होइन तर आफ्नै स्तरको राम्रो गाउँछन् बजाउँछन् । त्यसैले बेला बेलामा म पनि यसो सयम मिल्दा छिर्छु । उनीहरुसँग कुरा गर्दा पनि रमाइलो हुन्छ । रमाइलो कुरा गर्छन् ।
यस्ता बिद्यार्थीलाई बिद्यालयमै खाने बस्ने ब्यबस्था गरेको छ । त्यसमा लाग्ने खर्च दस जना बिद्यार्थीको सरकारले दिन्छ । अरुको ब्यतिगत रुपमा सहयोग गर्नेहरुबाट चलिरहेको शिक्षक महर्जन बताउँछन् । हामीलाई अझ धेरै बिद्यार्थी राखेर पढाउने मन छ तर समस्या आर्थिक पक्षको पनि हुन्छ । अहिले हामीले यो भन्दा धेरै बिद्यार्थी राख्न सक्ने अबस्था छैन । भबिष्यमा आर्थिक पक्ष सुधार भए हामी अझ बिद्यार्थी राखेर पढाउन सक्छौ । उनले भने ।
Labels: article of gocool, children of nepal, disable children, Junkiri, nagarik, student of lalitpur
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो कार्वन उत्सर्जन । त्यही कार्वनलाई सोसेर रुख बिरुवाले आफुलाई चाहिने खाना बनाउँछ । वायुमण्डलमा भएको कार्वनको मात्रा घटाउँछ । यो प्रकृयालाई नै कार्वन संचिति भनिन्छ । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै वनमा कार्वन संचिति बढाए वापत भुक्तनी दिने संयन्त्रलाई रेड प्लस भनिन्छ । रेड प्लसका बारेमा अन्तराष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको सहयोगमा तयार पारिएको डकुमेन्ट्री ।
लेखन तथा निर्देशन
गोकुल ध्वर्जे तामाङ
Labels: forestry of Nepali . documentary of gocool, gokul dhorje tamang's documentary, REDD documentary
हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मूल मन्त्र भन्ने नाराका साथ जुन ५मा विश्व वातावरण दिवस मनाइयो । अनि यहीबेला नेपालले सन् २०१३ र १४ को लागि नेपालले कम बिकसित देशको तृत्व गर्ने अवसर पायो । अबका दिनमा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आफ्ना मुद्धा उठाउन नेपालले के गर्नुपर्ला ।
लेखन र निर्देशन
वातावरणको कुरा गर्दा सफा शहर सबैको कल्पनामा आउँछ । तर शहर सफा गर्न कल्पना गरेर पात्रै पुग्दैन । सबैले केही न केही गर्नुपर्छ । अनि साँच्चिकै वातावरण जोगाउन लाग्ने हो भने सबै मिल्नैपर्छ । कुनै समारोह वा विशेष दिवसका दिन गरिने कामले एकछिनलाई सन्तोष मिल्ला तर अभियानकै रुपमा यो काम नगरे भोलीदेखि यो मुद्धा बिर्सनेको संख्या निकै बढी हुन्छ । अनि यस्तो अभियान केही समय अगि गरिएको नगर सफाई अभियान भन्दा पनि भिन्दै हुनु जरुरी छ । काठमाडौंमा परापुर्व काल देखि नै सिठी नख ः भन्ने चाड मनाइन्छ । यो दिन कुवा, इनार, पोखरी सफा गर्ने चलन छ । यस्ता अभियान र चाडमा के फरक छ त ?
Labels: aankhijhyal, gocool thokar, ldc in nepal, nefej video, report of gocool thokar, video of gocool
थापाथलीबाट हतारिदै रत्नपार्क जाँदै थिएँ । मुलसडक सुनसान थियो । लाग्यो थापाथली इन्जिनियरङका बिद्यार्थीले आन्दोलन गरे होलान् । पढाई र आन्दोलन कुन बढि हुन्छ क्याम्पसमा भने आन्दोलन भन्ने जवाफ आउने पढाई पराम्पारा छ हाम्रो । तर्क दिनेले नेपाली माटो सुहाउने पढाई शैली पनि भन्लान् । अनि कपि राइट हाम्र्रै भन्लान ।
गाडिमा जाने हो भने थापाथलीबाट रत्नपार्क पुग्न मुस्किलले दस मिनेट लाग्छ । त्यसो हुनु एउटा शर्त छ, गाडि जाम पर्नु भएन । पैदलै जाने हो भने पनि आधा घन्टामा रत्नपार्क पुगिन्छ । त्यसैले म आधा घन्टा पहिले नै निस्किएँ ।
गाडि नभए पछि हिड्नुको बिकल्प थिएन । त्यसैले एकसुरले थापाथली चोकबाट त्रिपुरेश्वर तिर लम्किनै लागेको बेला झप्प पछिल्तिरबाट कसैले तान्यो । तनाई मज्जाकै थियो । उसको तनाईले म झन्डै लडेको । कुन चाहि चिनेको होला रोक्न यसो गरेको होला भनेर पछिल्तिर फर्कन्छु त शशस्त्रको हल्दार साहेव पो मलाई तानिरहेका रहेछन् ।
ओइ केटा आँखा गोजीमा हालेर हिडेको छस् ?
सडकैमा हेरेर हिडेको छु त । के भयो ।
आँखा सडकमा भएको भए देखेनस हामीलाई ।
किन नदेख्नु देखेको हो । अरु बेला पनि बस्थ्यौ आज पनि बसेछौ अनि फरक के भो र ?
होइन आज फरक छ ।
के फरक छ?
आज राष्ट्रिपति महोदयको सवारी छ । त्यसैले अहिले जान मनाही छ ।
यसो पारी हेरेको मान्छे हिडिराखेका छन् । औलो पारी तिर पार्दै मैले अघि तानेको रिस फेर्दै झर्किएँ ।
हो त पारीको पारी हिड्ने वारीको वारी । बाटो तर्न मनाही छ ।
होइन म जानु पर्छ ।
तिमीले जिद्दी गरेर हुन्छ जान पाउदैनौ ।
उनले मलाई यसरी हेरे मानौ मेरो हातमा बम छ र म उनैलाई ताकेर हानिहाल्छु । पुग्न त पारी नै हो । उता साथी मलाई रत्नपार्कमा पुग्नु छ । मलाई सधै आरोप लाग्छ बेलामा आउँदैनस् । समयको महत्व थाहा नभएको मानिस । जान खोज्यो हल्दार महोदय मज्जाले अठ्याएर भन्छ तैले पर्खनुपर्छ । रिसको पारो चढ्यो । गर्नु के ? फेरी चुप लागेर बस्नुको बिकल्प भएन । ती भुडे हल्दारसँग तर्क गर्नु भन्दा चुपचाप बस्नु उत्तम झै लाग्यो । हुनत त ती भुडे हल्दारको पनि दोष थिएन । उनलाई माथिबाट आदेश आयो । बाटो रोक भने । उनले त्यसै गरे । उनीसँग के रिसाउनु ।
सडकमा हेर्यो खाली छ । कति खेर ती राष्ट्रपति कति खेर हुइकिने हुन् कुनै पत्तो छैन । बिस्तारै बस्दा बस्दै मान्छेका हुल धेरै भए । सबैले सडक पार गर्न माग राखे । हुदैन भन्नलाई प्रहरी माथि प्रहरी थपिए । यति गरुन्जेल पाँच मिनेट जति बितेको हुदो हो ।
माग माथी माग आए पछि पाखा लागेर बसेका असइ खुइया गर्दै आए । उनको वाकीटकीमा के भने । अनि हामीलाई सडक पार गर्न दिए । हिड्दा हिड्दै कसैले भने यस्तै गर्छन र त बम हान्नु पर्ने । अरु कसैले भने राजा गएर के भो अर्को राजा आएछन त ।
पैदलै रत्नपार्क पुग्न लाग्दा पनि राष्ट्रपति महोदय आएका थिएनन् । थापाथलीबाट रत्नपार्क पुग्नु भनेको कम्तिमा आधा धन्टा होला । अनि मलाई लाग्यो राष्ट्रपति पहोदयले शितलनिबासमा सुरुवालको इजार कस्दै गर्दा तिनका भरौटे कुरौटेले काठमाडौको बाटो खाली गराउने रहेछन् । महोदयले दौराको तुना कस्दै गर्दा कति सडकमा म जस्तै मनुवालाई त्यसरीनै घिर्सादा हुन् । कति सवारी साधानको आइसीमा तिरेर आधा दिन लाइनमा बसेर हालेको इन्धन सकिदो हो ? हुन त यस्तो कुराको हिसाव किताव गर्ने न सरकारले गर्छ न राष्ट्रपतिले । तिनलाई आफू हिड्ने सडक खुल्ला भए भयो अरुका बाल मतलब ।
कुनै दिन कतै मैले सुनेको थिएँ राष्ट्रपतिका अमृत बाणी । उनले भनेका थिए । म किसानको छोरो । मैले सानो हुँदा भैसी चढेको हुँ चराएको हुँ । मलाई सबै नेपालीको जीवनशैली थाहा छ । यदि त्यसो भए उनले किन त्यात्रो समय काठमाडौका यत्रा धेरैलाई सास्ती दिएका होलान् । हुन त ती हिजो जनता थिए अब राजा भए भनौ शासक भए । शासक र शासितको फरक नै त्यही होला कि ?
Labels: article of gocool, Kathmanduko katha, Ktm, president of Nepal, sawari, thokar